MYANMAR: Observations at 18:00 16.5.2013, Cyclonic Storm (MAHASEN) has moved Northeast wards and centered at about (110) miles West-Northwest of Maungdaw | democracy for burma
MYANMAR: Observations at 18:00 16.5.2013, Cyclonic Storm (MAHASEN) has moved Northeast wards and centered at about (110) miles West-Northwest of Maungdaw
tags: 16th May 2013 Morning., Bangladesh Coasts, Burma, CYCLONE, Department of Meteorology and Hydrology, Kachin, Maungdaw, Myanmar, Northern Rakhine, TROPICAL STORM
Cyclone News Issued at (18:00)hours MST on (16-5-2013), According to the observations at (17:30)hrs M.S.T today, Cyclonic Storm (MAHASEN) over North Bay of Bengal has crossed Bangladesh Coasts near Chittagong. It is forecast to move Northeast wards as land depression and weaken gradually.
MAHASEN-after landfall, it will become an inland storm affecting Kalemyo in northern Chin Division; Mawlaik, Ban Mauk in Northern Sagaing (Monywa, Salingyi, Yin Mar Bin) , cross from Bhamo-Myitkyina highway in Kachin State to reach Yunan Province on 18th May
ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း MAHASEN သည်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အထက်ပိုင်း သို့ ဖြတ်သန်းမည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းရှိ မင်းကင်းမြို့ ကလေးဝမြို့ ကလေးမြို့ တမူးမြို့ မော်လိုက်မြို့ ဖောင်းပြင်မြို့ ဟုမ္မလင်းမြို့ ခန္တီးမြို့ နယ်များရှိ ပြည်သူများအနေဖြင့် မုန်တိုင်းအန္တရယ် အတွက်အထူးသတိပြုကြရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း ထိုအပြင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းနှင့် အနီစပ်ဆုံးဖြစ်သော ကနီမြို့ မုံရွာမြို့ ဆားလင်းကြီး ယင်းမာပင် ပုလဲမြို့နယ်များအနေဖြင့်လည်း အသင့် အနေအထားတွင်ရှိရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သလ္လာဝတီတိုင်းမ်မီဒီယာဂရု
မှ လေးစားစွာဖြင့် အစီရင်ခံတင်ပြအပ်ပါသည်။
JTWC မှ နာရီ ၁၂ဝ အထိ ကြိုတင် ခန့်မှန်းချက်အရ မုန်တိုင်း MAHASEN သည် ကုန်းတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ပြီးနောက် ကုန်းတွင်း မုန်တိုင်းအဖြစ် – ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ကလေးမြို့ အနီးမှလည်းကောင်း၊
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အထက်ပိုင်း မော်လိုက်၊ ဘန်းမောက် မြို့များအနီးမှလည်းကောင်း၊ ကချင်ပြည်နယ် ဗန်းမော်-မြစ်ကြီးနား ကားလမ်းမကို ဖြတ်သန်း၍ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ် ဒါလီမြို့အနီးသို့ မေလ ၁၈ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ၁၈၃ဝ နာရီတွင် ရောက်နိုင်ဘွယ်ရှိကြောင်း ခန့်မှန်းထားပါသည်။
မောင်တောမြို့ နယ်မှာ တပ်မတော်နဲ့ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ များက ဒေသခံများ ရွှေ့ပြောင်းရေးတွင် ပါဝင် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။ U YE HTUT INFORMATION
——-01B13 ဟာ အမည်တပ် မုန်တိုင်း MAHASEN (Name origin: Sri Lanka) ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။
Department of Meteorology and Hydrology (Myanmar
← Ven. Ashin Kawwida Open Letter to His Holiness Dalai Lama over wrongly condemning english/burmese
“ စနေကောက်နုတ်ချက် ( တစ်ပါတ်အတွင်း အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခြင်း ) – ၃ ”88 GENERATION PR →
Manmar :Fighting government troops and SSPP/SSA erupted in Shan state amid Peace trust-building talks
#UPDATE #19 ‪#‎ด่วน‬ ฮ. #รองแม่ทัพภาคที่3#ตก #คาดว่าเสียชีวิตทั้งลำ #9 #นาย @ #พะเยา
#update #MOI #ရန်ကုန်မှာ #ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးသန့်ရှင်းနဲ့ #NNER
Kokang party leader kin to “King of Opium”